သငျတို့ရဲ့ ကူညီမြှဝမှေုကွောငျ့ ဖိနပျရောငျးတဲ့ ဘဘ အတှကျ အထောကျအကူဖွဈခဲ့ပါပွီ – Daily Feed MM
သငျတို့ရဲ့ ကူညီမြှဝမှေုကွောငျ့ ဖိနပျရောငျးတဲ့ ဘဘ အတှကျ အထောကျအကူဖွဈခဲ့ပါပွီ
Admin_John | May 20, 2020 | News | No Comments
ဖိနပျဖိုး စုစုပေ့ါငျး၆၁၅၀၀ ကညီမလေး စိုးစန်ဒာ နမျ့တော့ကပါ ဖှေးက ၁၀၀၀၀ ; မပနျးအိ ၃၀၀၀၀ ; မဟနျနီကလညျး ၃၀၀၀၀ ထပျလှူပေးပါတယျ
လေးစားဖို့ကောငျးလိုကျတာဗြာ…………….ဖိနပျသညျအဘဆီက အကုနျယူလိုကျတာတဲ့လေ..ဘဘတို့အိမျက ဂနျ့ဂေါကြောငျးမကျြနှာခငျြးဆိုငျလမျးမှာ အိမျငှားနတောပါ လမျးညှနျပေးကွတဲ့သူတှအေားလုံးကိုလညျးကြေးဇူးတငျပါတယျ🙏🙏🙏….
အဖိုးရဲ့ ဖိနပျဆိုငျလေး ပွနျဖှငျ့တာ ၃ ရကျရှိပါပွီ အဖိုးက Mask မတပျထားတာ တှလေို့ Mask သှားပေးရငျး အဖိုးနဲ့ စကားလကျဆုံ ကွဖွဈခဲ့ပါတယျ။အဘိုးဘာလို့ Mask မတပျတာလဲလို့ မေးလိုကျတော့ အဘိုးက သူရဲ့ဘေးမှာခထြားတဲ့ အိမျတှငျးလုပျ နှာခေါငျးစညျးလေးကို ပွရငျး နားရှကျတှနောလို့ ခဏခြှတျထားလို့ ဆိုပါတယျ။
” အိမျမှာခြုပျတာဆိုတော့ ဘယျနရောလိုသှားလို့လဲ မသိဘူး တပျရတာနားရှကျနာတယျ ငါ့မွေးလာပေးတဲ့ နှာခေါငျးစညျးမြိုး ကွတော့လဲ အဖိုးဝယျပွီးတပျနိုငျပါဘူးကှယျ ”
အဘိုးရဲ့ စကားဆုံးသှားခြိနျ ခငျးထားတဲ့ ဖိနပျတှကေိုကွညျ့လိုကျတော့ တဈခုခုလိုနသေလို ခံစားမိလိုကျရပါတယျ အရငျကဆို မိုးကာနဲ့အပွညျ့ ဖိနပျတှကေို ခငျးထားတာပါ အခုတော့ မိုးကာအပွညျ့ မခငျးနိုငျတော့တဲ့အပွငျ ဒီဖိနပျတှကေ နောကျဆုံးလကျကနျြ ဖိနပျတှဆေိုတာကို သိလိုကျရပါတော့တယျ။
” သင်ျကွနျ မတိုငျခငျကတညျးက ဆိုငျပိတျလိုကျရတာ စားစရာမရှိတော့လို့ နောကျဆုံးကနျြတဲ့ ဖိနပျတှနေဲ့ ဆိုငျ ပွနျဖှငျ့တာ ဖိနပျအသဈတှပွေနျလုပျဖို့ ပစ်စညျးတှကေ မနျလေးမှာ ကိုယျတိုငျသှားဝယျရတာ အခုကားခက အသှားအပွနျ သုံးသောငျးလောကျဆိုတော့ သှားဝယျဖို့ အဆငျမပွတေော့ဘူး မုံရှာမှာက ဝယျလို့ရပမေယျ့ ပစ်စညျးက အစုံမရှိဘူး”
အဖိုးရဲ့ အသကျက ၈၅ နှဈရှိပါပွီ ဖိနပျလုပျငနျးကို ၁၀ စုနှဈတဈခုကြျောကွာ လုပျကိုငျခဲ့သူတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ လှနျခဲ့တဲ့ ၂ နှဈကြျောက ဇနီးဖွဈသူနဲ့ အတူဆိုငျဖှငျ့ခဲ့ပမေယျ့ အခုဆိုရငျ ဇနီးသညျ လညျး ဆုံးပါးသှားခဲ့ပွီမို့ အဖိုးတဈယောကျထဲသာ ဆကျလကျဆိုငျဖှငျ့နတောပါ။အဖိုးရဲ့ ကတ်တီပါ ဖိနပျတှကေ ဒီဇိုငျးလဲဆနျးသလို ခိုငျခံမှုလဲရှိပါတယျ ကလေးစီး၊ ကြား/မ ဖိနပျဆိုဒျမြိုးစုံရှိပွီး ဈနှေုနျးကလဲ တဈထောငျကနေ သုံးထောငျအထိသာရှိပါတယျ။
” အဘိုးက မနျးလေးသားစဈ အသကျ ၄၅ နှဈလောကျမှ မုံရှာကိုပွောငျးခဲ့တာ ဒီကိုပွောငျးလာတော့ ဒုက်ခတျောတျောရောကျခဲ့တာ စီးပှားက အဆငျမပွဘေူး ကုနျအရောငျး အဝယျလုပျတာလဲ အဆငျမပွေ နောကျဆုံး ဘယျအလုပျမှ အဆငျမပွလေို့ ဒီဖိနပျလုပျငနျးကို လုပျဖွဈသှားတာ ”
ဒီကာလမှာ လူတိုငျးစီးပှားရေး အကွပျအတညျးကို ရငျဆိုငျနပေမေယျ့ အဘိုးလို အသကျကွီးရှယျအိုတှကေ ဝမျးစာအတှကျ လှုပျရှားရုနျးကနျရတာ ပိုမိုခကျခဲလိမျ့မယျလို့ ထငျမိပါတယျ။အကယျ၍မြား လမျးသငျ့လို့ အဖိုးရဲ့ဖိနပျဆိုငျလေးရှိရာ မုံရှာ အ.ထ.က ၂ ကြောငျးအနီး ဆေးရုံလမျးကို ရောကျခဲ့ရငျ ဖိနပျလေးတှေ ဝယျယူအားပေးခဲ့ကွပါလို့ တိုကျတှနျးရငျး ဒီစာကို အဆုံးသတျ လိုကျပါရစေ…။
သင်တို့ရဲ့ ကူညီမျှဝေမှုကြောင့် ဖိနပ်ရောင်းတဲ့ ဘဘ အတွက် အထောက်အကူဖြစ်ခဲ့ပါပြီ
ဖိနပ်ဖိုး စုစုပေ့ါင်း၆၁၅၀၀ ကညီမလေး စိုးစန္ဒာ နမ့်တော့ကပါ ဖွေးက ၁၀၀၀၀ ; မပန်းအိ ၃၀၀၀၀ ; မဟန်နီကလည်း ၃၀၀၀၀ ထပ်လှူပေးပါတယ်
လေးစားဖို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ…………….ဖိနပ်သည်အဘဆီက အကုန်ယူလိုက်တာတဲ့လေ..ဘဘတို့အိမ်က ဂန့်ဂေါကျောင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်လမ်းမှာ အိမ်ငှားနေတာပါ လမ်းညွှန်ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်🙏🙏🙏….
အဖိုးရဲ့ ဖိနပ်ဆိုင်လေး ပြန်ဖွင့်တာ ၃ ရက်ရှိပါပြီ အဖိုးက Mask မတပ်ထားတာ တွေ့လို့ Mask သွားပေးရင်း အဖိုးနဲ့ စကားလက်ဆုံ ကြဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဘိုးဘာလို့ Mask မတပ်တာလဲလို့ မေးလိုက်တော့ အဘိုးက သူရဲ့ဘေးမှာချထားတဲ့ အိမ်တွင်းလုပ် နှာခေါင်းစည်းလေးကို ပြရင်း နားရွက်တွေနာလို့ ခဏချွတ်ထားလို့ ဆိုပါတယ်။
” အိမ်မှာချုပ်တာဆိုတော့ ဘယ်နေရာလိုသွားလို့လဲ မသိဘူး တပ်ရတာနားရွက်နာတယ် ငါ့မြေးလာပေးတဲ့ နှာခေါင်းစည်းမျိုး ကြတော့လဲ အဖိုးဝယ်ပြီးတပ်နိုင်ပါဘူးကွယ် ”
အဘိုးရဲ့ စကားဆုံးသွားချိန် ခင်းထားတဲ့ ဖိနပ်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့ တစ်ခုခုလိုနေသလို ခံစားမိလိုက်ရပါတယ် အရင်ကဆို မိုးကာနဲ့အပြည့် ဖိနပ်တွေကို ခင်းထားတာပါ အခုတော့ မိုးကာအပြည့် မခင်းနိုင်တော့တဲ့အပြင် ဒီဖိနပ်တွေက နောက်ဆုံးလက်ကျန် ဖိနပ်တွေဆိုတာကို သိလိုက်ရပါတော့တယ်။
” သင်္ကြန် မတိုင်ခင်ကတည်းက ဆိုင်ပိတ်လိုက်ရတာ စားစရာမရှိတော့လို့ နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ ဖိနပ်တွေနဲ့ ဆိုင် ပြန်ဖွင့်တာ ဖိနပ်အသစ်တွေပြန်လုပ်ဖို့ ပစ္စည်းတွေက မန်လေးမှာ ကိုယ်တိုင်သွားဝယ်ရတာ အခုကားခက အသွားအပြန် သုံးသောင်းလောက်ဆိုတော့ သွားဝယ်ဖို့ အဆင်မပြေတော့ဘူး မုံရွာမှာက ဝယ်လို့ရပေမယ့် ပစ္စည်းက အစုံမရှိဘူး”
အဖိုးရဲ့ အသက်က ၈၅ နှစ်ရှိပါပြီ ဖိနပ်လုပ်ငန်းကို ၁၀ စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာ လုပ်ကိုင်ခဲ့သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကျော်က ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ အတူဆိုင်ဖွင့်ခဲ့ပေမယ့် အခုဆိုရင် ဇနီးသည် လည်း ဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီမို့ အဖိုးတစ်ယောက်ထဲသာ ဆက်လက်ဆိုင်ဖွင့်နေတာပါ။အဖိုးရဲ့ ကတ္တီပါ ဖိနပ်တွေက ဒီဇိုင်းလဲဆန်းသလို ခိုင်ခံမှုလဲရှိပါတယ် ကလေးစီး၊ ကျား/မ ဖိနပ်ဆိုဒ်မျိုးစုံရှိပြီး ဈေနှုန်းကလဲ တစ်ထောင်ကနေ သုံးထောင်အထိသာရှိပါတယ်။
” အဘိုးက မန်းလေးသားစစ် အသက် ၄၅ နှစ်လောက်မှ မုံရွာကိုပြောင်းခဲ့တာ ဒီကိုပြောင်းလာတော့ ဒုက္ခတော်တော်ရောက်ခဲ့တာ စီးပွားက အဆင်မပြေဘူး ကုန်အရောင်း အဝယ်လုပ်တာလဲ အဆင်မပြေ နောက်ဆုံး ဘယ်အလုပ်မှ အဆင်မပြေလို့ ဒီဖိနပ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ဖြစ်သွားတာ ”
ဒီကာလမှာ လူတိုင်းစီးပွားရေး အကြပ်အတည်းကို ရင်ဆိုင်နေပေမယ့် အဘိုးလို အသက်ကြီးရွယ်အိုတွေက ဝမ်းစာအတွက် လှုပ်ရှားရုန်းကန်ရတာ ပိုမိုခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။အကယ်၍များ လမ်းသင့်လို့ အဖိုးရဲ့ဖိနပ်ဆိုင်လေးရှိရာ မုံရွာ အ.ထ.က ၂ ကျောင်းအနီး ဆေးရုံလမ်းကို ရောက်ခဲ့ရင် ဖိနပ်လေးတွေ ဝယ်ယူအားပေးခဲ့ကြပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း ဒီစာကို အဆုံးသတ် လိုက်ပါရစေ…။
မီးမရှိတဲ့ ခငျြးရှာလေးက မွနျမာတဈနိုငျငံလုံး (ဝိဇ်ဇာတှဲ) အမှတျအမြားဆုံး ၆ ဘာသာ ဂုဏျထူးရှငျ ကြောငျးသားလေး
ကိုဗဈက မွနျမာနိုငျငံမှာ အားကောငျးနဆေဲဖွဈတယျလို့ ဒေါကျတာ ဇျောဝစေိုး သတိပေးလိုကျပွီ
မုနျတိုငျး ဝငျရောကျနိုငျကွောငျး မိုးဇလ ထုတျပွနျထား
လူတိုငျးနီးပါး မုနျ့ဟငျးခါးထဲ ထညျ့စားတတျတဲ့ အကွျောရဲ့ ကွောကျမကျဖှယျရာ